Neefta (asthma) waa cudur daba-dheer (serious) ee ku dhaca hawo mareenada sambabaha, kasoo ka dhiga kuwo barara. Qayb ka oh neeftaada waa ogaashada waxyaabaha kara iyo in dayo in fogaado. Tijaabada PEFR waxaa lagu isticmaalaa qalab yar ee gacanta lagu qabto ee lagu magacaabo cabbiraha neef-baxsiga ugu dheer (peak flow meter) oo cabbiraayo inta ay tahay hawada aad ka saari karto sambabahaaga. Waxaa la akhrin doonaa tijaabada kadibna lagu siin daawo oo wax- u leh gaaban that is waqti. Waxaa ka soo boodidda neefta daawayn karaa oo la laga qaadanaayo beta2 -agonists.
Haddii aad qabtid neef, neef-mareenada sambabahaaga (bronchi) ayaa aad ugu dareen badan kuwa caadiga ah, waxyaabo qaarkood ayaa wax-yeelayn kara, kuwaaso gaarsiinaayo xiiqlayn, qufac, xabadka oo adkaado iyo neefta oo kugu adkaato. Caadi kugu kicin karo neefta waxaa ka ah dufta xayawaanka - iyo xabadka, ee guriga laga helo, waxyaabaha geedaha soo baxo sigaarka, hawada qabow. Calaamadaha ku soo neefta aad xun si dhaqsi ah u si xumaadaan.
Qayb ka oh daawaynta neeftaada waa waxyaabaha iyo in laysku dayo in laga fogaado. Tijaabada PEFR waxaa lagu isticmaalaa qalab yar ee gacanta lagu qabto ee lagu magacaabo cabbiraha neef-baxsiga ugu dheer (peak-flow meter) oo cabbiraayo inta ay tahay hawada aad ka saari karto sambabahaaga. Waxaa la akhrin doonaa miisaanka jirka tijaabada waxaa siin doonaa daawo oo neefta wax- u leh waqti gaaban. Waxaa ka boodidda lagu daawayn karaa oo la kordhiyo laga qaadanaayo beta2 -agonists.